धेरै मानिसहरू मात्र निरन्तर बिरामी छ के द्वारा जीवनमा सफलता हासिल गर्न सक्दैन वा बराबरीको सम्म महसुस छैन। निस्सन्देह, यो तपाईं एक्लै र एक अस्पताल बाँच्न गर्दा अगाडि सार्न कठिन छ। वास्तवमा, यो समस्या सजिलै remedied सकिँदैन किनभने, यो सहनु हुँदैन। कसरी यसलाई के गर्ने? त्यसो गर्न, प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन।
सिद्धान्त मा, जीव को रक्षा प्रणाली एकदम सजिलो छ बलियो बनाउँछ। तपाईं प्रतिरक्षा प्रणाली स्तरवृद्धि गर्ने विशेष भिटामिन र खनिज पूरक वा खाद्य पदार्थ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबैका यसलाई हामी पोषक अधिकांश प्राप्त खाना थियो भनेर थाह थियो किनभने कसैले, हाम्रो स्वास्थ्य हामी खान के मा निर्भर गर्दछ भन्ने तथ्यलाई गरेर हैरानी गरिने असम्भाव्य छ। आफूलाई ब्याकटेरिया, जीवाणुहरू र लीक बाहिर हामीलाई दस्तक गर्न सक्ने अन्य कुराहरू विभिन्न विरुद्ध सुरक्षा गर्न अर्थ जो - प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन। के खाद्य पदार्थ प्रतिरक्षा वृद्धि? वास्तवमा, यी उत्पादनहरु को धेरै। यो माछा, मासु र फल र तरकारी। हामीलाई स्वस्थ बन्न मदत गर्न सक्छ कि केहि छैन केवल सबैभन्दा आधारभूत ध्यान गर्नुपर्छ बतान त सजिलो छ, र यसैले।
के खाद्य पदार्थ प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो
1) गाजर। यो तरकारी धेरै शक्तिशाली phytonutrients छ बेटा-carotene, धेरै छन्। धन्यवाद उहाँलाई, प्रतिरक्षा प्रणाली सही रकम सेता रक्तकोषहरू जीवाणुहरू जीवाणुहरू र अन्य कुराहरू विभिन्न हामीलाई रक्षा कि प्ले गर्ने क्षमता छ। पनि गाजर falkarinola हाम्रो शरीर बढ्न दिंदैन क्यान्सर कक्षहरूको धेरै मा। गाजर कच्चा खाएको वा रस बाहिर squeeze छन्। यसलाई गाजर मा निहित छन् भनेर पदार्थ, सबै भन्दा राम्रो व्यक्ति बोल्ड कुरा संग उत्पादन प्रयोग गर्दा अवशोषित छ टिप्पण लायक छ। बस उपयोगी तरकारी तपाईं आफ्नो पेट मा हुनेछ पछि रोटी र मक्खन एउटा सानो टुक्रा खान - यो संयोजन गर्न पूर्ण उनको साथ, गाजर मा थप्न कुरा छ मतलब छैन।
2) खरबूजा। उहाँले मात्र आफ्नो तिर्खा मेट्न, तर पनि शरीर रक्षा गर्न सक्षम छ। यो कुरा एक चिसो पछि चाँडै ठीक गर्न मद्दत गर्छ यो संक्रमण विभिन्न हामीलाई जोगाउँछ glutathione, समावेश गर्ने हो, र पनि।
3) उत्पादनहरु जो वृद्धि प्रतिरक्षा - यो मुख्यतया ती खाद्य पदार्थ जो एउटा उदाहरण अंगुर दाख रूपमा भिटामिन सी को उच्च मात्रा समावेश गर्दछ। निरन्तर भोजन यसको प्रयोग गर्नेहरूलाई, अरूलाई भन्दा धेरै कम संभावना ग्रस्त, र तिनीहरूले आँखाको प्रतिभा र धेरै राम्रो अनुहारको रुप रंग द्वारा प्रतिष्ठित गर्न सकिन्छ। माथिको-उल्लेख भिटामिन बाहेक, अंगुर दाख जो राम्रो तरिकाले प्रतिरक्षा प्रणाली प्रोत्साहित flavonoids, को पर्याप्त रकम समावेश गर्दछ।
4) लसुन। परम्परागत चिकित्सा जहाँ यो प्रयोग गरिन्छ व्यञ्जनहरु, धेरै बताउन सक्छ। लसुन साँच्चै अद्वितीय गुण छ देखि, प्रतिरक्षा प्रणाली, थुप्रै तरिकामा उहाँको कमसल मा स्तरवृद्धि गर्ने अन्य सबै उत्पादनहरु। सारा बिन्दु कि प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो र मानव शरीर र जीवाणुहरु सबै जीवाणुहरू हत्या हो। निरन्तर उपभोग गर्ने लसुन मान्छे, धेरै शायद बिरामी।
5) ब्रोकोली। पहिले, यो उत्पादन मात्र वजन गर्न चाहन्थे, तर अब यसलाई खाएको छ गर्नेहरूलाई, र चाहनेहरूलाई द्वारा प्रयोग गरिन्छ स्वस्थ हुन। यो वैज्ञानिकहरू प्रतिरक्षा प्रणाली प्रोत्साहित गर्ने ब्रोकोली मा पदार्थ को उपस्थिति साबित गरेको छ भन्ने तथ्यलाई कारण छ।
6) Oysters। तिनीहरूले स्वादिष्ट उत्कृष्ट, तर पनि धेरै उपयोगी छन्। यो साँच्चै सिर्फ एक अद्भुत उत्पादनको।
प्रतिरक्षा प्रणाली स्तरवृद्धि गर्ने केही उत्पादन, हामी एक दैनिक आधार मा प्रयोग र पनि थाहा छैन। यी उत्पादनहरू रोटी, स्याउ र अधिक समावेश गर्नुहोस्। उहाँले छिटो खाना खान सुरु गर्दा मानव मा प्रतिरक्षा समस्या सामान्यतया सुरु, र अरू सबै कुरा, तपाईं एक खाजा (बर्गर, हट डग, आदि) हुन सक्छ के। निस्सन्देह, यो सधैं तपाईं खोज्न र खाना पकाउनु चयन गर्न को लागि समय छैन, तर अझै पनि यो गरिब पोषण को परिणाम धेरै रोगहरु जसको उपचार दिन को धेरै लिन टाढा हुनेछ भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ लायक छ।
Sweetener "फिट परेड": संरचना, उपयोगी गुणहरू। चिनी विकल्प को समीक्षा
खाद्य - यो के हो? शब्द को अर्थ "खाना"
ताप मसले आलु यसको घटक निर्भर
को ग्लाइसेमिक इन्डेक्स के हो?
के बाट स्टाइलिश हेर्न नीलो प्यान्ट लगाउन?
त्यहाँ उनको टाउको मा एक टक्कर छ किन
पत्रुस Chardon ब्रूक्स
उपकरण कस्तो भएको छ-3 मा राख्नु? थप उपकरण स्थापना (ट्यांक को विश्व)
एक पिंजरे मा स्कर्ट सबैभन्दा सफल शैलीहरू